Wasiirka arrimaha dibada Ruushka oo Madaxweyne Putin u jeediyay in 35 diblomaasi oo Mareykan ah laga ceyriyo Ruushka si looga jawaabceliyo go’aankii Mareykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWasiirka arrimaha dibada Ruushka oo Madaxweyne Putin u jeediyay in 35 diblomaasi oo Mareykan ah laga ceyriyo Ruushka si looga jawaabceliyo go’aankii Mareykanka
December 30, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Wasiirka arrimaha dibada Ruushka Sergey Lavrov. [Sawirka: Archive]
Moscow-(Puntland Mirror) Ruushka ayaa maanta oo Jimce ah iclaamiyay inuu qorshaynayo inuu dalkiisa ka saaro 35 diblomaasi oo Mareykan ah iyadoo looga jawaabcelinayo cunaqabataynta Washington, sida ay ku warameen wakaaladaha wararka Ruushka.
Wasiirka arrimaha dibada Ruushka Sergey Lavrov ayaa tilaabooyinkaas ay qaadayaan u jeediyay Madaxweyne Vladimir Putin.
“Wasaaradda arrimaha dibada Ruushka…. waxay ka codsatay madaxweynaha Ruushka in uu ogolaado cayrinta 31 shaqaale ah oo katirsan safaarada Mareykanka uu ku leeyahay gudaha Moscow iyo afar diblomaasi oo katirsan qunsuliyada kutaala magaalada St Petersburg,” ayuu yiri Lavrov oo taleefishinka ka hadlayay.
Arrintan ayaa imaanaysa maalin kadib markii, Mareykanku uu sheegay in uu dalkiisa ka saarayo 35 diblomaasi oo Ruush ah.
Madaxweyne Putin wali ma uusan ogolaan codsiga ay u soo jeedisay wasaaraddiisa arrimaha dibada.
Xukuumada Madaxweynaha wakhtigiisu sii dhammaanayo ee Mareykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka in uu faragelin ku sameeyay doorashadii dhacday bishii November, 2016-ka.
In badan oo kamid ah xisbiga Dimuqraadiga ee Madaxweyne Barrack Obama ayaa aaminsan in weerar dhanka hawada ah oo Ruushku u geysteen codadka doorashada ay waxyeelaysay Hillary Clinton fursadihii ay ku guulaysan lahayd doorashadaaas oo uu uga guuleystay Donald Trump.
December 29, 2016 Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo sheegay in heshiis xabad-joojin ah laga gaaray colaada Suuriya
Reer Guuraa dowladda Puntland ka codsaday in ay ku taageerto baabuur ay ugu guuraan deegaanada roobabku ka da’een
Madaxweyne Putin oo kasoo horjeestay in dalka Ruushka laga ceyriyo diblomaasiyiin Mareykan ah
Pyongyang-(Puntland Mirror) Dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in ay tijaabiyeen “Gantaal Nukleer ah oo lagu guulaystay” si ay uga hortagaan waxay ugu yeereen cadaawada Maraykanka, taleefishinka dowlada Waqooyiga Kuuriya ayaa ku waramay, tasoo ka xanaajisay [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa saacadaha soo socda la filayaa in uu tago magaalo xeebeedka Qandala, wuxuuna noqonayaa Madaxweynihii kowaad ee Puntland oo taga halkaas ku dhawaad 18-sanno oo Puntland jirtay. [...]